AajaChat Apk Download Ho an'ny Android [2022 Dating App]
Ianao ve mitady sehatra hihaonana amin'ireo olona vaovao sy fotoana mety? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny sehatra tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe AajaChat. Io no rindranasa Android farany indrindra, izay manolotra tolotra sosialy sy fiasa tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa. Manolotra ny fanangonana vondrona sy olona betsaka indrindra ao aminy.
Mora kokoa ny fiaraha-monina eo amin'ny tontolon'ny teknika. Afaka miditra mora foana ianao ary mahazo na inona na inona amin'ny paompy vitsivitsy fotsiny. Misy ny rindranasa sosialy sy tranokala samihafa, izay ahafahan'ny mpampiasa mifanerasera mora foana. Afaka mahita olona vaovao mora foana ianao ary hianatra zavatra vaovao amin'ireo sehatra ireo.
Ny olana, izay matetika atrehin'ny olona, ​​dia ny famandrihana premium. Ny rindranasa malaza sy be mpampiasa indrindra dia manome tolotra premium, izay tsy maintsy novidian'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola tena izy. Tsy azo atao ny mandoa vola isaky ny mpampiasa, izay mahatonga azy ireo hampiasa endri-javatra voafetra amin'ny fampiharana.
Misy ny manilika ireo fetra rehetra apetrak'ity rindrambaiko ity, izay manolotra endrika tsara indrindra ho an'ny mpampiasa amin'ny fotoana rehetra. Misy endri-javatra mahavariana taonina ao amin'ity fampiharana ity, izay hozarainay aminareo rehetra amin'ny antsipiriany. Noho izany, mijanona miaraka aminay fotsiny ary mahazoa ny fampahalalana rehetra momba ity app ity.
Topimaso momba ny AajaChat App
Izy io dia rindranasa Android Social, izay manolotra sehatra lehibe indrindra ho an'ny fiaraha-monina mba hidiran'ny rehetra. Manome mpikambana mavitrika an'arivony, vondrona samihafa, serivisy fiantsenana ary maro hafa ho an'ireo mpampiasa. Ny endri-javatra rehetra misy dia maimaim-poana ampiasaina, izay midika fa tsy mandoa premium.
Misy sokajy samihafa hita ao amin'ity rindranasa ity, izay azon'ny mpampiasa idirana mora foana. Saingy mila manoratra ny kaontinao amin'ny voalohany ianao. Misy fomba fisoratana anarana samihafa, izay ahafahanao mamita ny fizotry ny fisoratana anarana.
Ny fomba voalohany dia ny fisoratana anarana amin'ny mailaka, izay tsy maintsy ampidirinao ny mailakao sy hisoratra anarana ny kaontinao amin'ny mailakao. Ny fomba faharoa dia ny nomeraon-telefaona, izay tsy maintsy fisoratanao ny kaontinao amin'ny alàlan'ny nomeraon-telefaonao.
OTP dia halefa amin'ny nomeraon-telefaonao, miditra fotsiny ny kaody OTP dia hahazo fidirana ianao. Manolotra ny fizarana telo lehibe amin'ny fampiratiana. Ny fizarana voalohany dia ny trano, izay manome faritra fanampiny. Manolotra mafana, mavitrika ary vaovao izy io. Azonao atao ny miditra amin'ny faritra rehetra ary miditra amin'ny vondrona rehetra.
Ny fizarana faharoa dia ny sokajy, izay ahitana ny vondrona rehetra. Misy vondrona samihafa azo alaina, izay manolotra karazana mpikambana samihafa. ny App mampiaraka manolotra sokajy mampiaraka sy tovovavy, izay ahafahan'ny mpampiasa mahita namana sy miala voly mora foana.
Misy ihany koa ireo vondrona fanabeazana, izay ahafahanao mizaha toetra amam-panahy bebe kokoa. Raha miatrika olana farany sy mitady asa ianao, dia misy vondrona manokana misy. Afaka mahita ao aminao ny fampahalalana mifandraika amin'ny asa ianao ary mampihatra izany.
Ny fizarana fahatelo dia Me, izay manolotra ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny kaontinao. Azonao atao ny manampy ny kaonty sosialinao hafa amin'ity fampiharana ity. Manome toe-javatra manokana momba ny fiainana manokana ihany koa izy io, izay azonao hanatsarana mora foana amin'ity fizarana ity.
Misy endri-javatra mahagaga maro kokoa hita ao amin'ity app ity, izay azon'ny rehetra ankafizina. Noho izany, alaivo ity fampiharana ity ary alao ny endri-javatra rehetra misy amin'ny fampiharana. Raha manana fanontaniana momba izany ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Anaran'ny fonosana com.vmate.aajachat
Developer Eo moa
Fanangonana vondrona lehibe indrindra
Mpikambana mavitrika an'arivony
Fanasokajiana vondrona tsara indrindra
Raiso ny fahalalana tsara indrindra momba ny sahaninao
Hihaona amin'ny olona vaovao
Amin'izao fotoana izao dia tsy hita ao amin'ny Google Play Store ity fampiharana ity, fa aza manahy. Hizara rohy azo antoka sy miasa miaraka aminareo rehetra izahay. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao ary manamboatra paompy tokana eo amboniny. Hanomboka ho azy ny fisintomana rehefa vita ny paompy.
AajaChat Apk no sehatra tsara indrindra hahitan'ny olona fotoana vaovao sy hihaona amin'ny olona vaovao. Noho izany, fantaro ny zava-baovao sy vaovao rehetra eran'izao tontolo izao. Raha mila fampiharana sy fika mahavariana misimisy kokoa dia tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Apps, Social Tags AajaChat, AajaChat Apk, AajaChat App, App mampiaraka Post Fikarohana
Kuroyama Hack VIP Apk Download Ho an'ny Android [2022 Hack]